DOWNLOAD Lockheed CP-140 Aurora Royal Canadian Air Force FSX & P3D - Rikoooo
downloads 4 520
Ihe omuma site na Team KBT. HD ederede site na Adrian Brausch. Zukọtara ma nwalee n'ime P3Dv4 nke Chris Evans jiri faịlụ dị
Kwa ụgbọelu zuru ezu (omenala ndị a na-eji emepụta ihe + nke a na-eji eme ihe na-egosi na ọ bụ "Royal Canadian Air Force"). Ekele Chris Evans maka maka ihuenyo na echiche nke mkpọ.
Prepar3D v4: Dochie ihe na-ekwekọghị na ọnụ (32 ibe n'ibe) na idozi ahụhụ nke Rikoooo.
Kọmitii Lockheed CP-140 Aurora bụ ụgbọelu ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri nke Royal Canadian Air Force ji arụ ọrụ. Ụgbọelu ahụ dabeere na lockheed P-3 Orion airframe mana ọ na-ebunye ụlọ electronic nke Lockheed S-3 Viking. "Aurora" na-ezo aka na chi chi ọbụbọ nke Rom nke na-efega n'elu igwe kwa ụtụtụ tupu anyanwụ amalite. (Wikipedia)
Onye edemede: Ihe osise site na Team KBT. HD ederede site na Adrian Brausch. Zukọtara ma nwalee n'ime P3Dv4 nke Chris Evans jiri faịlụ dị